UsabilityHub: Nika kwaye ufumane uyilo oluthile okanye ingxelo yokuSebenza | Martech Zone
UsabilityHub: Nika kwaye ufumane uyilo oluthile okanye ingxelo yokuSebenza
NgoLwesithathu, Julayi 1, 2015 NgoLwesithathu, Julayi 1, 2015 Douglas Karr
Sifanele ukuya kwi Yiya kwintengiso engenayo Inkomfa ebanjwe kwingingqi ngu Isiqendu sesithathu. Yayingumsitho omnandi kunye nolungelelwaniso olumangalisayo lwezithethi ezikhuthazayo nezifundisayo. Esinye sezithethi sasikhona U-Oli Gardner, umququzeleli we Unbounce abaqokelele ndawonye inqaku elinye lokubonisa ngokubaluleka kunye nefuthe lovavanyo.
Siza kwabelana ngenye yeengxelo ezinikwe ngu-Oli kwizithuba ezizayo, kodwa bendifuna ukwabelana ngesinye sezixhobo asixelele zona asithanda kakhulu… UkusebenzisekaHub. UsabilityHub ikuvumela ukuba wabelane ne-logo yoyilo lwamva nje ukuze ubone ifuthe layo, wabelane ngeenguqulelo ezahlukeneyo zephepha ukuze ubone ukuba yeyiphi ekhethiweyo, okanye ufumane ingxelo apho abasebenzisi banokuhamba khona kwindawo yakho ukuze bafumane into.
Unga bhalisa ngaphandle kweendleko kwaye ube ngumsebenzisi wesiza ukunika ingxelo kwabanye abasebenzisi. Iimpendulo ezivela kubavavanyi obamemayo zisimahla. Iimpendulo ezi-odolwe kuluntu lwase-UsabilityHub zibiza indleko enye ngetyala. Iimpendulo ezivela kubavavanyi benani elithile labantu zibiza iindleko zeekhredithi ezi-1 nganye. Ungazifumana zombini iikhredithi ngokuvavanya abanye okanye ungazithengela eyakho. Ukuba uba lilungu lePro, ufumana ama-3% kwixabiso lekhredithi.
Nanku umzekelo omkhulu apho inkampani yayivavanya ukhetho lwendlela yokukhangela kwindawo yabo:
I-UsabilityHub ineeMvavanyo ezi-4 zokuSebenza onokukhetha kuzo
Uvavanyo lwesiBini isiBini -Uvavanyo lwesiBini esiHlanu lubonisa uyilo lwakho kumvavanyi imizuzwana nje emihlanu. Emva kokuphela kwemizuzwana emihlanu, umvavanyi ubuzwa uthotho lwemibuzo oyichazayo, enje Ucinga ukuba yeyiphi imveliso ethengiswayo yile nkampani?, okanye Yayiyintoni igama lenkampani?.
Cofa kuvavanyo -Iirekhodi zoVavanyo loKlikha apho abasebenzisi bacofa uyilo lwakho. Umhloli uceliwe ukuba alandele imiyalelo oyichazayo, enje Ungacofa phi ukujonga inqwelo yakho yokuthenga?, okanye Ungacofa phi ukukhetha itemplate yebhlog yakho?.
Uvavanyo lokukhetha -Uvavanyo olukhethwayo licela umvavanyi ukuba akhethe phakathi kwezinye iindlela ezimbini zoyilo. Ungacela abavavanyi ukuba bakhethe ngokusekwe kuphawu oluthile (umzekelo. Luluphi uyilo olubonakala luthembekile ngakumbi?), okanye ubabuze ngokulula ukuba bakhetha ntoni na.
Uvavanyo lokuhamba kwamanzi -Uvavanyo lweN Nav Flow luchonga ukuba ngabavavanyi banokuhamba ngempumelelo kuyilo lwakho. Ufaka uthotho loyilo lwephepha, kwaye ucacise apho umvavanyi anokucofa khona ukuze aqhubeke. Impumelelo kunye nokusilela kwenqanaba labavavanyi kubhalwa kwinyathelo ngalinye.
tags: uluvo loyilouluvoUkusebenziseka hubukusebenziseka kovavanyouvavanyo lomsebenzisi
IShotfarm: Inethiwekhi yesiqulatho seMveliso yeeMveliso kunye nabaenzi
Ukubaluleka kweefowuni ezifowunelwa kuhambo loMthengi